Toamasina -Fandraharahana: tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo Karana | NewsMada
Toamasina -Fandraharahana: tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo Karana
Mitaraina ny mpandraharaha malagasy eto Toamasina, ankehitriny amin’ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ ireo Karana “Indo-Pakistaney”, nefa mitazam-potsiny ny fitondram-panjakana ka lasa fandraharahana gaboraraka eto amin’ny firenena. Tazana ho misy ambadika tsy fandoavan-ketra sy fampidirana vary sy lafarinina efa simba sy lo. “Raha ny lalàna mifehy ny fandraharahana ataon’ny vahiny eto amin’ny firenena mantsy, mijanona ho mpanafatra entana avy any ivelany izy ireny. Tsy izay anefa ny zava-misy, fa mpanafatra izy ireo no mpamongady ary mbola mpaninjara ihany koa. Aiza amin’ izay ny anjara fandraharahana ataon’ny Malagasy ? ” hoy ny loharanom-baovao nanaovana fanadihadiana.
Nohamafisin’izany loharanom-baovao izany fa bodoin’ ireo Karana ny fanafarana entana eto amintsika, mety ho loza mihantona amin’ny mpanjifa sy ny mpandraharaha malagasy izany. Fantatatra avy amin’ny fanadihadiana fa saika handraisan’ireo teratany vahiny ireo anjara avokoa ny fanafarana vary, siramamy, menaka sakafo, lafarinina, vato mamy, sns… ireo rehetra ireo mampanahy amin’ny fahasalamam-bahoaka noho ny kalitao tsy azo antoka, ary takalony ny fanondranana voamaina avy eto amintsika tsara kalitao ka isika indray no manjifa ny ratsy avy any ivelany.
Nohamafisin’ny fanazavana hatrany fa mitsoaka fandoavan-ketra amin’ny varotra ataony isan-taona ireo Karana mpandraharaha voalaza ireo, manova hatrany ny mpitantana ny orinasa sy ny anaran’ny orinasa raha vita ny herintaona tokony handoavan-ketra. Raha tombanana, manodidina ny 2.000 kaontenera isan-taona ny vary hafarana sy voamaina aondrana.
Miroborobo ny magazay tsy mazava
Nambaran’ireo mpandraharaha malagasy fa mora kokoa ny fivoahan’ny kamiao avy ao amin’ny seranan-tsambo, raha ohatra ka entana misoratra amin’ny anarana orinasa vahiny no havoaka ary mifanohitra amin’ izay raha misoratra amin’ny orinasa malagasy. “Tsy vitsy rahateo ny kamiao an’ny Malagasy tsy mahazo manao asa fitaterana entana tato ho ato, ahina mihitsy ny mety hivarotana ny kamiao”, hoy ny mpandraharaha malagasy. An-daniny, saika efa manana magazay fametrahana entana eto an-toerana avokoa ireo vahiny, saingy ny mampalahelo, tsy misy mari-pamantarana ny orinasa tompony izy ireny fa miorina fotsiny eny rehetra eny.
Nohamafisin’ny loharanom-baovao hatrany fa tokony hisy lalàna sy fepetra manokana momba ireny magazay ireny fa vokatry ny firoboroboany ihany no manamora ny fanafenana vary sy entana ilain’ny mpanjifa isan’andro, raha tsy ilaza ny fanafangaroana vary simba amin’ny vary madio ary aparitaka eny an-tsena. Andrasana izao, ohatra, ny hanehoan’ny fanjakana ny lafarinina 12 kaontenera efa simba, anatina magazay iray eto Toamasina.